Inkiyankiya yokuqoka unozinti kubaqeqeshi beChiefs - Impempe
Inkiyankiya yokuqoka unozinti kubaqeqeshi beChiefs
June 18, 2021 Impempe.com
U-Itumeleng Khune noMUlomowandau Mathoho
Kuyinto ejabulisayo kubaqeqeshi ukuba abadlalai bakho babe yimiqemane bonke, futhi bakulungele ukudlala. Lokhu kwenza kube nomoya wokuncintisana kuyilo nalowo mdlali efuna litholwe nguye ijezi.
Kodwa kwiKaizer Chiefs ukubuya kwabo bobathathu onozinti bayo, oDaniel Akpeyi, Itumeleng Khune noBruce Bvuma kuzobaphithanisela amakhanda abaqeqeshi ngokuthi baqoke bani.
IChiefs inomdlalo omqoka nozoba nzima neWydad Atheltic yaseMorocco eStade Mohammed V, eCasablanca. Lo mdlalo ngowomlenze wokuqala kweyandulela owamanqamu kwiCAF Champions League.
Owesibili uzodlalela eFNB Stadium, eGoli ngoJuni 26. IChiefs kufanele ibuye newini noma idlale ngokulingana kodwa kube namagoli ukuze ibe sethubeni elingcono lokudlulela kowamanqamu.
Emdlalweni yayi eyisikhimbisa edlule, iChiefs beyivimbe ngoBvuma emapalini futhi wenza omuhle umsebenzi lo. Nguye owaba yiqhawe beshaya iSimba SC ngo 4-0 eFNB Stadium emdlalweni wequaterfinal. Waphinda okufanayo naseTanzania emlenzeni wesibili.
Yize angenelwa amagoli amathathu kulo mdlalo, kodwa indlela avimba ngayo yenza abaning baqala bambuka ngelinye iso. Nokuthi aqokwe ngumqeqeshi omusha weBafana Bafana, uHugo Broos eqenjini lakhe ebe esambone kanye edlala kwamnyusela isithunzi.
Kodwa manje uyashoda ngamava kuleli zinga okudlalwa kulo ekubeni bobabili oKhune no-Akpeyi banawo. Bobabili bebengamathemba amaqembu esizwe kuleli naseNigeria ngokwehlukana isikhathi eside.
Kodwa le sizini ayibavumanga njengoba bebenza amaphutha ashayisa ngamahloni futhi afaka iqembu enkingeni. Kuzothatha amehlo ukubona ukuthi ngubani kulaba bobathathu ithimba labaqeqeshi elizonquma ukumqalisa.
Kuzokhumbuleka ukuthi njengamanje iChiefs inethimba elikhulu labaqeqeshi eliholwa nguMolefi Ntseki bese kuba ngumqeqeshi uStuart Baxter namasekela ake o-Arthur Zwane noDillon Shepard.
Cishe izinqumo eziningi bazozithatha ngokuhlanganyela kodwa ebhentshini kuzobe kuhleli uZwane noShepard. UBaxter usalinde incwadi emgunyaza ukusebenza kuleli.
Previous Previous post: Usale enconcoza uMartinez uDe Bruyne emhlenga endukwini
Next Next post: Ubona ingozi yokuzifaka ezikweletini uKadodia ofake iMaritzburg endalini